Home News DEG DEG:Qarax iyo Rasaas laga maqlay guadaha magaalada Muqdisho
Sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno degmada Waabari gaar ahaan waaxda Hanti Wadaag, qarax gaari lagu xiray ayaa Caawa wuxuu ka dhacay halkaasi.
Qaraxan oo ah nuuca loo yaqaan dhajiska, ayaa waxaa lagu qarxiyay gaari nuuca raaxadda ah, sida dadka degaanka ay inoo xaqiijiyeen.
Maamulka degmada Waabari ayaa xaqiijiyay in aysan jirin qof ay waxyeelo kasoo gaartay,Waxaa ay sidoo kale inoo sheegeen in ay waddaan baaritaano.
Ciidanka ammaanka oo tagay goobta ayaa xiray nawaaxiga goobta qaraxa gaariga uu ka dhacay, halkaasi oo baaris ay ka sameeyeen sida maamulka ay xaqiijiyeen.
Inta badan qaraxyada noocaan oo kale ah ee dhajiska loo yaqaan, ayaa waxa ay Shabaab ku xiraan gaadiidka ay leeyihiin xubnaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya u shaqeeya.
Previous articleWakiilka Yurub, Alex Rondos oo dallaalaya Iibinta Hantida Qaranka Soomaaliyeed
Next articleWararkii ugu danbeeyay Haweyn lagu Weraray Gaalkacyo.
Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in ay Saxiixday Qaraarka Qaramada Midoobay...